Dagaalka Ruushka Iyo Maraykanka Iyo Sirdoonka Ruushka oo Qaarajinta Ciidanka Maraykanka. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Dagaalka Ruushka Iyo Maraykanka Iyo Sirdoonka Ruushka oo Qaarajinta Ciidanka Maraykanka.
Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa soo gabagabeeyey in unug ka tirsan sirdoonka milatariga Ruushka si qarsoodi ah ugu deeqay mintidiin xiriir la leh Taliban si ay u laayaan ciidamada isbahaysiga ee Afghanistan – oo ay ku jiraan bartilmaameedsiga ciidamada Mareykanka – inta lagu gudajiro wadahadalka nabadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka muddada dheer halkaa ka socday, sida laga soo xigtay saraakiil kooban. arrinta.
Mareykanka ayaa bilo ka hor soo gabagabeeyey in unugga Ruushka, oo lala xiriiriyay isku day dil iyo hawlgallo kale oo khasaare ah oo ka dhacay Yurub oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo reer Galbeedka ama looga aargoosto kuwa lala wareego, ay si qarsoodi ah u siisay abaalmarinno weerarro guul ku dhammaaday sanadkii hore.
Xagjiriinta Islaamiga ah, ama xubno dambiilayaal hubaysan oo aad ugu dhaw, ayaa la rumeysan yahay inay uruursadeen xoogaa lacag ah, saraakiisha ayaa sidaas yidhi. Labaatan qof oo Mareykan ah ayaa lagu dilay dagaalka Afgaanistaan ​​sannadki 2019, laakiin ma cada in dilalkaas shaki laga qabay.
Raadinta sirta ayaa loo ogeysiiyey Madaxweyne Donald Trump, Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cadna waxay ka wada hadleen dhibaatada ka dhaceysa kulan is-weydaarsi ah dabayaaqadii Maarso, mas’uuliyiinta ayaa yiri. Saraakiisha ayaa diyaariyey liistada ikhtiyaarada suurtagalka ah – laga bilaabo cabashada diblomaasiyadeed ee Moscow iyo dalbashada in la joojiyo, oo ay la socdaan cunaqabateynno isa soo taraya iyo jawaabo kale oo suurtagal ah, laakiin Aqalka Cad weli ma uusan oggolaan tallaabo kasta, saraakiisha ayaa sidaas yidhi.
Howlgal lagu dhiirrigelinayo dilka Mareykanka iyo ciidamada kale ee NATO waxay noqon doontaa mid sii kordheysa oo kicineysa waxa saraakiisha Mareykanka iyo Afqaanistaan ​​ay sheegeen inuu yahay taageerada Ruushku siiyo Taliban, waana markii ugu horreysay oo la ogeysiiyo unugyada basaasida Ruushka inay abaabuleen. weerarada ciidamada reer galbeedka.
Wax kastoo lug ah oo ku saabsan Daalibaan ee sababay dhimashada ciidamada Mareykanka waxay sidoo kale noqon doontaa kor u qaad weyn ee dagaalka loogu yeero Ruushka ee dagaalka ka dhanka ah Mareykanka, istiraatiijiyad lagu jahwareerayo cadawga iyada oo la isku darayo xeeladaha noocan oo kale ah sida borotokoolka, faafinta warar been abuur ah. , iyo isuduwidda iyo diidmada hawlgallada millatari.
Xoghayaha Difaaca Ruushka, Dmitry Peskov, ayaa sheegay in Kremlin-ka aan lagu wargalin eedaha loo soo jeediyay. “Haddii qof sameeyo iyaga, waan ka jawaabi doonnaa,” ayuu yidhi Peskov.
Zabihullah Mujahid, af hayeenka Taalibaan ayaa dafiray in kooxaha kacdoonka wada “wax xiriir ah oo noocaas ah ay la leeyihiin hay’ad kasta oo sirdoon ah” wuxuuna ugu yeeray warbixinta isku day la doonayo in lagu sumeeyo.
Wuxuu yiri “Heshiisyada noocan oo kale ah ee lala galo hay’adda sirdoonka Ruushka waa wax aan sal lahayn – dilalkeenna la beegsanayay iyo dilalkeennu waxay ahaayeen kuwa sii socday sannadihii ka horreeyay, waxaanan ku qabannay agabkeenna,” ayuu yidhi. “Taasi waxay bedeshay ka dib heshiiskii aan la galnay Mareykanka, noloshooduna waa ay sugan tahay anaguna ma weerareyno.”
Af-hayeenka Golaha Amniga Qaranka, Pentagon, Waaxda Arimaha Dibadda iyo CIA-da ayaa diiday inay ka hadlaan.
Saraakiishan si weyn u yaqaan sirdoonka ma aysan sharixin dib u dhaca Aqalka Cad ee go’aaminta sida looga jawaabayo sirdoonka ku saabsan Ruushka.
In kasta oo qaar ka mid ah la taliyayaashiisa ugu dhow, sida Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mike Pompeo, ay la tashteen siyaasado badan oo hareeya oo ku wajahan Ruushka, Trump wuxuu qaatay mowqif ku habboon dhinaca Moscow.
Shir madaxeedkii ka dhacay Helsinki 2018, Trump wuxuu si adag u soo jeediyey inuu aamino diidmada Putin ee ah in Kremlin ay faragelin ku sameysay doorashadii madaxtinimada ee 2016, in kasta oo heshiis ballaaran uu ka dhexeeyey aasaaskii sirdoonka Mareykanka ee ay taas sameysay. Trump ayaa dhaleeceeyay sharci ku soo rogay cunaqabateyn Ruushka markii uu u saxeexay sharci kadib markii Koongarasku meel mariyey diidmada qayaxan. Hadana wuxuu si isdaba joog ah u sameeyay hadalo khalkhal gelinaya xulafada NATO sidii caqabado ka dhan ah gardarada Ruushka ee Yurub.
Saraakiisha ayaa ka hadlay xaalada qarsoon si ay u sharaxaan sirdoonka xasaasiga ah iyo falanqaynta gudaha. Waxay sheegeen sirdoonka in loola dhaqmay si sir ah oo dhaw ah, laakiin maamulku faafiyay warbixinno kooban oo ku saabsan toddobaadkan – oo ay ku jiraan la wadaagga macluumaadka ku saabsan dawladda Ingiriiska, oo ciidamadooda ay ka mid yihiin kuwa la sheegay in la bartilmaameedsaday.
Qiimaynta sirdoonka ayaa la sheegay inay ku salaysnaan ugu yaraan qayb ahaan su’aalaha la waydiinayo xagjiriinta Afgaanistaan ​​ee la qabtay iyo dambiilayaasha. Saraakiishan ma aysan sheegin farsamooyinka howlgalka Ruushka, sida sida bartilmaameedyada loo soo qaaday ama sida lacagta ay gacmaha isu baddesho. Sidoo kale ma cada in howl wadeenada Ruushka ay gudaha u galeen Afghanistan ama ay la kulmeen dhiggooda Taliban meel kale.
Muujintii ayaa diiradda saarey gudaha maamulka Trump waqti xasaasi ah oo mashquul ah. In kasta oo masuuliyiintu ay ururiyeen xog sirdoonka horaantii sanadka, kulanka isdhaxgalka ee Aqalka Cad ayaa dhacay xilli cudurka faafa ee coronavirus uu noqday qalalaaso qeybo ka mid ah dalkana ay xirnaayeen.
Intaa waxaa dheer, sida uu Trump u raadinayo doorashada bisha Nofembar, wuxuu doonayaa inuu heshiis nabadeed la galo kooxda Taliban si loo soo afjaro dagaalka Afghanistan.
Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Afqaanistaan ​​labaduba waxay horey ugu eedeeyeen Russia inay hub yar iyo taageero kale siiso Taalibaanka taasoo la micno ah inay khalkhal galin karto howlaha, in kasta oo mas’uuliyiinta dowladda Ruushka ay meesha ka saareen sheegashadaas “xanta xanta” iyo sal la’aan.
Jeneral John W. Nicholson Jr., oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan waqtigaas, ayaa yiri wareysi aan la yeelanay Ruushka. BBC.
In kasta oo ciidamada isbahaysiga ay ku waxyeeloobeen khasaarooyin dagaal oo xagaagii hore iyo dayrta hore, in yar oo ka mid ah ayaa la dilay. Afar Mareykan ah ayaa lagu diley dagaalka horaantii 2020, laakiin Taliban ma weerarin boosaska Mareykanka tan iyo heshiiskii Febraayo.
Ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale si aad ah hoos ugu dhigay dhaqdhaqaaqyadooda ka baxsan saldhigyada militariga sababtoo ah coronavirus, yareynta aragtidooda weerarka.
In kasta oo masuuliyiintu ay sheegeen inay kalsooni ku qabaan sirdoonka in hawlwadeennada Ruushku ay siinayeen oo ay siiyeen abaalmarinno dagaal yahanada Afqaanistaan ​​ee dilaya dadka Mareykanka, hadana waxay kalsooni weyn ka qabaan sida ay u sarreeyaan dowladda Ruushka hawlgalkii wadajirka ahaa ee la oggolaaday iyo waxa ujeeddadiisu noqon karto.
Saraakiisha qaar ayaa ka dhawaajiyay in Russia laga yaabo inay aarguddo ka dalbato ciidamada NATO dagaalkii 2018 ee ka dhacay Suuriya kaas oo ciidamada Mareykanka ay ku dileen boqollaal ka mid ah xoogaga taabacsan ee Siiriya, oo ay ku jiraan kuwo badan oo calooshood u shaqeystayaal Ruush ah, xilli ay ku sii siqayaan duullaanka Mareykanka. Saraakiisha waxay kaloo soo jeediyeen in reer Russia ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan wadahadalada nabada si Mareykanka uu uga sii darsado Afghanistan. Laakiin dhiirrigelinta ayaa ah mid murugsan.
Saraakiishan oo hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in dawladdu ay ku qiimeysay hawlgalku inuu yahay unug gacanta ku haya Cutubka 29155, oo ah gacanta hay’adda sirdoonka milatariga ee Ruushka, oo si weyn loogu yaqaanay GRU. Qeybta waxay ku xirantahay sumowga dareemayaasha marso ee Maarso 2018 magaalada Salisbury, England, ee Sergei Skripal, sarkaal hore u ahaa GRU oo ka soo shaqeeyay sirdoonka Ingiriiska ka dibna goostay, iyo gabadhiisa.
Saraakiisha sirdoonka reer galbeedka ayaa sheegaya in unuggan, oo shaqeynayay in kabadan toban sano, ay Kremlin ku soo oogtay inuu wado olole lagu khalkhal galinayo reer galbeedka iyada oo loo marayo jahawareer, jabin iyo dil. Marka laga soo tago sumowga 2018, unuggu wuxuu ka dambeeyay isku day afgambi oo ka dhacay Montenegro sanadkii 2016 iyo suntan sumeeyaha hubka soo saarta Bulgaria sanad ka hor.
Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegaya in GRU uu udub dhexaadka u ahaa dadaallada Moscow ee lagu faragalinayo faragelinta doorashada madaxweynaha 2016. Bilihii ka hor doorashadaas, saraakiisha Mareykanka waxay yiraahdeen, laba GRU cyberunits, oo loo yaqaan 26165 iyo 74455, ayaa galay habsami u socodka adeegayaasha xisbiga Dimuqraadiga, ka dibna waxay u isticmaaleen WikiLeaks si ay u daabacaan isgaarsiinta gudaha.
Qayb ahaan sababta oo ah dadaalladaas ayaa loogu talagalay inay gacan ka geystaan ​​sidii uu u dhici lahaa doorashada raalli ahaanshaha Trump, sida uu Trump u maareynayo arrimaha la xiriira Ruushka iyo Putin ayaa si gaar ah loo fiiriyey. Baaritaanka qaaska ee khaaska ah wuxuu ogaadey in ololaha Trump uu soo dhaweynayo faragalinta Russia uuna rajeynayo inuu ka faa iideysan doono, laakiin wuxuu helay cadeymo ku filan oo ku saabsan inuu cadeeyo in saaxiibbadiisa ay ku lug lahaayeen shirqool kasta oo dambi ah Moscow.
Hawlgallada ku lug leh Unugga 29155 waxay u muuqdaan kuwo ka xoog badan kuwa dagaallama kuwa loo yaqaan ‘cyberunits’. Saraakiisheeda ayaa had iyo jeer ku qurxinjiray halyeeyada milatariga sanado adeeg ah, xaaladaha qaarkoodna laga soo bilaabo dagaalkii fashilmay ee Midowgii Soofiyeeti ee Afghanistan 1980-yadii. Weligaa waligeed laguma eedayn inuu abaabulay weerarro lagu qaado askarta reer Galbeedka, laakiin saraakiisha ayaa warbixin ka siiyay hawlgallada ay sheegeen in ay sanado badan ka shaqeynayeen Afgaanistaan.
Previous articleDAAWO VIDEO XOG Turkiga Iyo GNA oo Qorshe Ku Qabsanayaan Sirta Iyo Jufra Ciidan Gudaha Ugalay
Next articleDEG DEG Dagaalkii Sadexaad Hindia Iyo Chinaha oo Maraykanka Ku Biiriyey Ciidankiisa